WAAYIHII WARSAME Q22AAD W/Q: Cali M Diini | Laashin iyo Hal-abuur
WAAYIHII WARSAME Q22AAD W/Q: Cali M Diini
WAAYIHII WARSAME Q22AAD
Macallin Cabdiwaaxid talada uu Warsame siiyay ee ah in uu Muna ka fogaado iyo xumaanta uu Muna ku meleeyay daacad ka ma ahayn ee dan kale ayuu watay. Maalmo yar kadib Cabdiwaaxid taleefanka ayuu qabsaday oo garaacay taleefoonkii landline-ka ee guriga Muna, Muna ayaaba ka qabatay. Yaa waaye? Iyo waa Cabdiwaaxid. Muna waa ay la yaabtay in Cabdiwaaxid soo wacay waayo 3 sannadood oo ay iskoolkiisa dhiganaysay waligiis ma soo wicin. Haddana waxa ay la sii yaabtay halka uu nambarka guriga ka soo helay. Muna shaki baa galay, waxa ay istiri ma Warsame ayaa soo siiyay taleefanka waayo waagii ay iskoolka bilowday guriga taleefanba ugu ma jirin. Isnabdin iyo kaftan yar kadib Cabdiwaaxid waxa uu Muna u sheegay in uu u soo wacay si uu ugu sheego sheeko muhiim ah. Muna oo wali shakisan ayaa tiri “macallin horta nambarka intee ka soo heshay ama ku soo siiyay?
Cabdiwaaxid: sow macallinkaagi ma ahi sideen nambarkaaga aanan u hayn?
Muna: laakiin markii aan iskoolka bilaabay taleefan guriga nooguma jirin sidaas darteed foomamnkii iskoolka kuma qorin nambar.
Cabdiwaaxid: markaad isbitaalka shaqada oa bilaabaysay sowtaad referance iga dhigatay oo nambarkaaga waraaq iigu qortay. Waa sax, Muna 4 bilood ka hor ayay isbitaalka magaalada shaqo ka bilowday kadib markii ay dhammaysay kalkaalsanimo ay machadka caafimaadka lagu barto ka baratay Cabdiwaaxidna waxa uu ka mid ahaa dhawr qof oo ay ku qoratay foomamka shaqada si haddii maamulka isbitaalku qof Muna yaqaanna ugu baahdaan u wacaan.
Muna: raalli noqo macallin waan hilaamaye
Cabdiwaaxid: waan dareemi karaa waxa hilmaanka badan kuugu wacan waanan kaaga garaabayaa runtii.
Muna: haa macallin, shaqo iyo waxbarasho in la isku wado waa cadaab.
Cabdiwaaxid: intaas kaliya haddii ay ahaan lahayd caymo ayaad yeelan lahayd laakiin mid ka daran baa kugu dhacday waanan kula qaybsanayaa murugada.
Muna: oo ah macallin?
Cabdiwaaxid: Muna waan ogahay wax walbo.
Muna: kuma fahmin macallin.
Cabdiwaaxid: waad i fahmaysaa waana sababta aan kuu doo wacay.
Muna: warka ii balballaari hee adigaaba war hayee.
Cabdiwaaxid: waxaan ku iri waan kula qaybsanayaa murugada.
Muna: bismillaah murugo i ma hayso macallin ee hadda ha ii saadin.
Cabdiwaaxid: Muna caadi iska dhig waan la socdaa sheekadaada oo dhan. Waxa aan kuu soo wacay in aan kuu sheego sheeko muhiim oo aadan ogayn waayo haddii aad ogaan lahayn murugta iyo ciilka maanta aad bartanka u fadhido u ma fadhideen.
Muna: haye macallin ii sheeg maxaa jira.
Cabdiwaaxid: Munaay waxa aan kuu sheegayaa, een, kow, horta markii hore waad fududaatay markii dambana waa ka sii fududaatay. Kow markii Warsame damac kaa galay oo aad dareen u qaadday waad fududaatay waayo anigu ismaba lahayn Muna ayaa Warsame ama nin la mid ah iska dhaaf in ay dareen kalgacal u qaaddee xattaa ku riyoonaysa. Markii dambe ayaadse ka sii dartay markii inta aad u tagtay ku tiri waan ku jeclahay. Waxaan arkaa in dhallinyaranimo iyo aqoon la’aan aadan Warsame aqoon ku qaadeen waayo hadddii aad aqoon fiican u lahaan lahayn kun jeer baad ka fiirsan lahayn inta aadan jacaylka u badandhigan. Muna oo la yaabban sida Cabdiwaaxid ku ogaaday in Warsame ku xumeeyay balse dareensan in uu asagu u sheegay Cabdiwaaxid ayaa tiri “sidee wax u maqashay maxaadse maqasha”
Cabdiwaaxid: waxa dhacay oo dhan waan ka dharagsanahay, in aad Warsame jeclaatay oo markii aad jacaylkii u badandhigatay uu kugu daadiyay. Muna oo murugtii jacaylka la daagdaray haddana ka sii xumaatay in warkii magaalada ku faafay oo sirteedi la ogaaday ayaa haddana ayada oo madaxa dhulka ka ceshaynaysa ayaa tiri “waxaasi waa been aniga ayaa ah qofka wax ku daadiyay, balse sidee ku ogaatay yaa kuu sheegay?”
Cabdiwaaxid: yaa kuu sheegay! Sow adigu cunug xun oo saqajaan ah wax kuma tarsan.
Muna: macallin Warsame saqajaan ma ahan waa nin wanaagsan. Labada qof xiriir waa yeelan karaan waana kala hari karaan, aniga Warsame wax kasta oo ma dhexmara walaalnimada ayaa ka wayn wax xumaan ah iyo saqajaanimana ku ma ogi.
Cabdiwaaxid: Muna, runta aan kuu sheego wax badan ayaanad ogayn. Warsame ayaa maalin dhawayd aniga oo xafiiska jooga ii yimid waxa uu na ii sheegay in uu khaati kaa taagan yahay oo meel uu kaa galo la’yahay, in aad ku tiri waan ku jeclahay iyo i guurso asna uu kaa diiday. Wuxuu igu yiri. Waxaan ku iri Muna waa gabar wanaagsan oo ayado oo kale aadan helayne haddii au ku rabto maad guursatid? Wuxuu igu yiri wax aan la yaabay aadna aan uga xumaaday. Xattaa Gaboobe ayaa na la joogay haddii aadan u rumaysanayn Gaboobe waad waydiin kartaa. Muna aad bay uga argagaxday hadalka Warsame laga sheegay, dhulkii ayaa la hadba dhimac u la sabbeeyay sidii ruux geeridii hooyadiis loo soo sheegay ayay noqotay. Waa ay u qaadan wayday sidii ay Warsame u aammintay iyo warxumada uu ka faafiyay. Ayada oo neeftuuraysa illintuna ka hibiq leedahay ayay tiri “maxay tahay waxa kale ee uu kuu sheegay?”
Cabdiwaaxid: waxa uu igu yiri “waan ka shakisanahay Muna sababta ay i guurso ii leedahay tolow ma wacal bay caloosha ku siddaa oo kugu asturi rabtaa ayaan is iri.” Muna markii intaas afka Cabdiwaaxid ka maqashay ooyin ayay afka furatay. Cabdiwaaxid oo dareemay ayaa ku yiri “markii uu waxaas ii sheegay waan xanaaqay waxaana aan damcay in aan gacan u qaado, Gaboobe ayaa iga qabtay. Waxaan ugu hanjabay haddii uu warkaas qof kale u sheego in aan garaaci doono iskoolkana ka cayrin doono”. Muna waa ay maqlaysay intaas balse awood ay uha jawaabto ma lahayn taleefankiina dhulka ayuu uga dhacay ayadoo Cabdiwaaxid wali khadka ku jiro. Cabbaar ayuu halow halow yiri ugu dambaynna markii uu wax jawaab ah waayay waa uu isi saaray taleefankii.
Muna tan iyo markii Cabdiwaaxid u sheegay wixii xilka lahaa ee Warsame falay sidii ay sariirta ugu duldhacday kama aysan kicin waxa ay mooddaa in magaalada dhan ayada ku sheekaysanayso. Xattaa ma awooddo in ay jikado cunto u doonato oo waxa ay mooddaa in Gaalkacyo oo dhan inta la soo rujiyay dusha laga saaray. Hooyadeed oo dareentay in wax si ka yihiin gabadheeda ayaa waydiisay wax ku dhacay waxayse u sheegtay in xoogaa xanuunsanayso.
Labo maalmood markii aysan iskool iyo shaqo aadin ayaa widaaydeed Maryan guriga ugu timid. Maryan oo aad uga naxday muuqaalka Muna ee aad u malaysid qof bilooyin badan maliilayay ayaa ayada oo naxsan waydiisay waxa ku dhacay. Muna waxa ay u malaynaysay in Maryan ogtahay waxa Warsame sameeyay balse markii ay aragtay in aysan waxba ogayn xoogaa nafis ah ayay heshay Muna.
Muna waxa ay Maryan u sheegtay warkii Warsame laga sheegay. Maryan oo si daran uga carootay waxa Warsame falay ayaa Muna ka codsatay in ay Warsame raadiyaan oo meel Alle meeshii uu joogi ugu tagaan soona garaacaan. Muna waxa ay Maryan u sheegtay in aysan taasi samayn farahana ka qaadaan oo beenabuurka uu sameeyay Alle u dhaafaan. Markii Maryan diiday in ay Warsame soo farasaaraan maahane wax kale ayaa Muna u sheegtay in hadda sheekada Cabdiwaaxid iyo Gaboobe ogyihiin balse haddii ay dagaal sameeyaan magaalada oo dhan ogaanayso Maryan na taas ayay ku qanacday.
Muna waxa ay go’aansatay in ay iskoolka ka harto oo aysan meel Warsame joogo dib dambe u tagin iska dhaaf in ay fasal uu fadhiyo fariisatee. Maryan ayaa ayaduna Muna u sheegtay in ayaduna iskoolka ka baxayso marba haddii saaxiibteed Muna ka baxayso. Sidaas ayay go’aan ku gaareen.
Markii labo maalmood aysan Muna iyo Maryan iskoolka imaan ayuu Cabdiwaaxid waydiiyay Warsame waxa ku dhacay labadii gabdhood maadaama Warsame xafiiska joogo ardaygii iskoolka aan imaanaynna uu xafiiska soo waco. Warsame waxa uu Cabdiwaaxid u sheegay in uusan ogayn waxa ku dhacay gabdhihii.
Cabdiwaaxid Muna ayuu wacay oo waydiiyay waxa ku dhacay waxa ayna u sheegtay in aysan iskoolka imaanayn dib dambe. Cabdiwaaxid oo dareensan ayaa ku yiri “Muna, Warsame dartiis miyaad waxbarashadaada dhan u baabi’inaysaa?” haddana asaga oo ka baqaya in Muna Warsame qabsato haddii ay iskoolka timaaddo ayuu yiri “dhib ma leh haddii aadan rabin in aad wajigiisa aragto aniga ayaa wax kale xallinaya, teeda kale sow ma ogid in adiga iyo Warsame ba uu iskoolku gebigebo idiin yahay oo bishaan marka ay dhammaato aad shahaadooyinkiinna qaadanaysaan? Muna ayaa tiri bishaas oo dhan sow fasalka isku arkimaynno ama xafiiska? Dhib ma leh aniga ayaa wax kala maaraynaya ee caawa ayaan ku soo wacayaa Maryan na u sheeg in aan raadinayay.
Habeenkii ayuu Cabdiwaaxid Muna wacay balse iskool iyo sheekadiis ma baa uusan u galin ee bad kale ayuu la aaday. Cabdiwaaxid waxa uu Muna u sheegay in ayada rabo guurna ka doonayo.